थोक अनुकूलन भारी शुल्क रिट्रेटेबल कुकुर पछाडिको कारखाना र आपूर्तिकर्ता कुडी
१.Retractable कर्षण रस्सी एक फ्ल्याट फ्ल्याट रिबन डोरी हो। यस डिजाइनले तपाईंलाई सजिलैसँग डोरी रोल गर्न अनुमति दिन्छ, जसले कुकुर पट्टीलाई घुमाउरो र घुमाउनबाट प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्दछ। साथै, यो डिजाइनले डोरीको बल-असर क्षेत्र बढाउन सक्छ, ट्र्याक्शन रस्सीलाई अधिक विश्वसनीय बनाउँदछ, र अधिक पुलिंग बलको सामना गर्दछ, तपाईंको अपरेशन सजिलो बनाउँदछ र तपाईंलाई बृद्धि प्राप्त आराममा व्यवहार गर्दछ।
२.360० angle उल्टो फ्री कस्टम भारी शुल्क फिर्ता लिन योग्य कुकुर पट्टा कुकुरलाई स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन सुनिश्चित गर्न सक्छ जब डोरी अड्याउने समस्याले गर्दा समस्या हटाउने। एर्गोनोमिक ग्रिप र एन्टि-स्लिप ह्याण्डलले आरामदायी होल्ड भावना प्रदान गर्दछ।
H. यहाँ एक हल्का आकारको पोर्टेबल पप वेस्ट ब्याग डिस्पेंसर र ह्यान्डलमा प्लास्टिकको फोहोर झोलाको १ रोल छ। यो ह्यान्ड्स-फ्री र सुविधाजनक हो। यसले तपाईंलाई हिंड्ने रमाईलोको आनन्द लिन मद्दत पुर्‍याउँछ।
जाँच पठाउनुहोस् अब कुरा गर्नुहोस्
कालो र सेतो वा कस्टम
एबीएस + टीपीआर + एसएस + नायलन
२० / /० / k० किलोग्राम
प्याकेज / लोगो:
कस्टम हेवी ड्यूटी रिट्रेक्टेबल कुकुर पानाको लाभ
भरपर्दो लकि mechanism संयन्त्रले यो सुनिश्चित गर्दछ कि रिबन विस्तार गर्न सकिन्छ र सजिलैसँग फिर्ता लिन सकिन्छ। ब्रेक बटन थिच्नुहोस् यसलाई ब्रेक गर्नका लागि, र पछाडि लक बटनलाई पछाडि स्लाइड गर्नुहोस्। यदि तपाईं नि: शुल्क सर्त पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने, पछाडि बटन स्लाइड गर्नुहोस्। केवल रोल-अन र रोल अफ अफ तपाईंको थम्बको साथ मात्र, सजिलो र सुरक्षित।
कस्टम भारी शुल्क retractable कुकुर पट्टा को छवि
1. तपाईं कारखाना वा ट्रेडिंग कम्पनी हुनुहुन्छ?
हामी २० वर्ष लागी पाल्तु जनावरहरुको उत्पादन निर्माण गर्ने कारखाना हौं।
२. कसरी ढुवानी गर्ने?
RE: ठूलो मात्रामा अर्डरहरूको लागि समुद्र वा हावा द्वारा, एक्सप्रेस डेलिभरी जस्तो डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, ईएमएस, टीएनटी सानो मात्रा अर्डरहरूको लागि।
यदि तपाईंसँग चीनमा शिपिंग एजेन्ट छ भने हामी तपाईंको चिन एजेन्टमा उत्पादन पठाउन सक्दछौं।
W. तपाईको नेतृत्व समय कुन हो?
RE: यो सामान्यतया days० दिन जति सामान्य छ। यदि हामीसँग स्टकमा उत्पादनहरू छन् भने, यो लगभग १० दिन हुनेछ।
I. के म तपाईंको उत्पादनहरूको लागि नि: शुल्क नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?
RE: हो, यो नि: शुल्क नमूना प्राप्त गर्न ठीक छ र कृपया तपाईंले शिपिंग लागत खर्च गर्नुभयो।
:: तपाईको भुक्तानी तरीका के हो?
RE: T / T, L / C, Paypal, क्रेडिट कार्ड र यस्तै।
Your. तपाईका उत्पादनहरूको प्याकेज कस्तो प्रकारको छ?
RE: प्याकेजलाई अनुकूलन गर्न ठीक छ।
C. के म अर्डर अघि तपाईंको कारखानामा जान सक्छु?
RE: पक्कै पनि, हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ। कृपया हामीसँग अगाडि भेट्नुहोस्।
यस स्टेनलेस स्टील डग कंघीको बारेमा तपाईंको खोजीको लागि हेर्दै
अघिल्लो: अतिरिक्त बन्जी फिर्ता योग्य कुकुर पाना
साना कुकुरहरूका लागि फिर्ता योग्य पट्टा
थोक फिर्ता लिन योग्य कुकुर पाना
चिंतनशील कपडा कुकुर कलर
अतिरिक्त बन्जी फिर्ता योग्य कुकुर पाना